CC Shakuur: Labo ilma adeer ah bay gacanta u gashay doorashadda | KEYDMEDIA ONLINE
CC Shakuur: Labo ilma adeer ah bay gacanta u gashay doorashadda
Keydmedia Online ayaa bil kahor soo qortay in Fahad Yaasiin uu Xildhibaanno iyo xubno gudi doorasho ka dhigayo askarta katirsan hay'adda Nabad Sugida NISA.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Wadajir C/raxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa ka hadlay sida Villa Somalia ay u dejisay qorshaha dib u doorashadda Farmaajo, oo musharax ah 2021.
Qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu ku sheegay in xubnaha gudiga doorashadda ee laga soo magacaabey Hirshabeelle iyo Galmudug ay yihiin xubno kamid ah hay'adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka ee NISA, islamarkaana uu soo xulay Fahad Yaasiin.
Sidoo kale, wuxuu xusay in gacan-yarihii Farmaajo, ahaana madaxa warbaahinta xafiiskiisa, mudooyinkii dambe noqday agaasime ku xigeenka Villa Somalia Cabdinuur Maxamed Axmed uu soo xulay inta badan xubnaha gudiga doorashadda ee heer Federaal, kuwaasoo dhamaantooda ah taageeriyaashii Madaxweynaha ee dhanka baraha bulshadda.
"Waa wax aan la aqbali karin in mustaqbalka dalka iyo doorashada xubnaha aan matalno ay maamulaan labo wiil oo ilma adeer ah," ayuu yiri C/raxmaan, isagoo ula jeeda Cabdinuur iyo Fahad, oo kasoo jeeda jal jufo hoose, oo katirsan beesha Sheekhaal Reer Aw-xasan.
Dhalinyaradii sida indha la'aanta Farmaajo ugu buun-buunin jiray "Social Media", ayaa sanadkaan lagu abaal-marinayaa inay Xildhibaano noqdaan, inay xubno ka noqdaan gudiyadda doorashooyinka, iyadoo qaarkood madax looga dhigay Hirshabeelle.
Keydmedia Online ayaa ku guda jirta baaritaan ay ku hayso sida Kooxda Farmaajo u faragelisay soo xulista xubnaha gudiyadda iyo khatarta ka imaan karta doorasho cod ku shubasho ah, oo aan si siman ugu tartamin Musharaxiinta oo idil.
0 Comments Topics: doorashadda fahad yaasiin farmaajo wadajir